Midowga Yurub iyo Soomaaliya oo saxiixday heshiis €100 million oo taageero miisaaniyadeed ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMidowga Yurub iyo Soomaaliya oo saxiixday heshiis €100 million oo taageero miisaaniyadeed ah
October 14, 2018 Puntland Mirror Somalia, Somalia 0
Heshiiska ayaa maanta oo Axad ah lagu saxiixay gudaha Muqdisho. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Midowga Yurub iyo Soomaaliya ayaa maanta saxiixday heshiis €100 million oo taageero miisaaniyadeed ah lagu siinayo Soomaaliya labada sanno iyo barka soo socda.
Maaliyadaan ayaa lagu taageeri doonaa dib u habeynta Dowladda Federaalka si loo dhiso dowlad goboleedyo mideysan.
Guddoomiyaha Midowga Yurub ee iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah Neven Mimica ayaa sheegay: “taageerada miisaaniyadeed waxay muujineysaa sida Midowga Yurub ugu kalsoontahay haayadaha Soomaaaliya. Waxay dowladda siineysaa dakhli si ay kor ugu qaado dib u habeynta iyo dhismaha dowlad xoogan oo awooda in ay bixiso adeegyada daruuriga ah ee dadku u baahanyihiin.”
Heshiiska ayaa maanta oo Axad ah lagu saxiixay gudaha Muqdisho.
Kabul-(Puntland Mirror) Qof miino isku soo xiray ayaa isku qarxiyay gudaha masaajid ay Shiicada leeyihiin oo kuyaala caasimada dalka Afkaanistaan ee Kabul, waxaana qaraxaas ku naf waayay ugu yaraan 27 qof, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha [...]